Ukuhlola umfanekiso wekhamera efihliweyo ngombono wobusuku kunye nokufunyanwa kwesitshixo (W) (SPY002) | Izisombululo ze-OMG
I-Spy Photo Efihliweyo Ikhamera eneNkcazo yoBusuku kunye nokuTyekiswa kweMoto (W) (SPY002)
I-CAMERA YOKUSEBENZA KWAKHAYA: I-lens eyakhelwe ngokufihlakeleyo ukufanisa isakhelo sezithombe njengomhlobiso wekhaya, phantse ungabonakaliyo ngaphandle kokuba uhambe ngokucokisekileyo. Ibhetri eyakhelwe ngaphakathi kwaye akukho migaqo yoyilo ivumela ukuba uyitshintshe kwi-shelf kwi-desk okanye udonga ngokukhululekile.
IKAMERA YOKWENZA UMBONO WONYAKA: Ngeteknoloji yesikhokelo samnyama, le khamera ye-spy ingayifaka imifanekiso ecacileyo ebumnyameni obumnyama ukuya kwi-15ft. Iya kutshintsha kumbono wobusuku ukurekhoda ngokuzenzekelayo kwindawo ephantsi yokukhanya.
ISICWANGCISO SOMSEBENZI WOKUSEBENZA: Ikhamera yezokukhusela iya kuqalisa ukurekhoda xa ifumanisa ukunyakaza kwezinto ukuya ku-25ft kwimodi yokurekhoda yokunyakaza, awuyi kuphinda uliphose ixesha elibalulekileyo, kunye nokugcina indawo kunye nobomi bebhetri.
Ukufumanisa ukuHamba kweMvakalelo
1. Ikhamera yezokukhusela iya kuqalisa ukurekhoda xa ithola ukunyakaza kwezinto ukuya kwi-25ft kwimodi yokurekhoda, kunye nokugcina indawo kunye nobomi bebhetri.
2. Esi sikrini ikhamera iya kuhlala iliso kwipropati yakho xa useholide okanye emsebenzini, qinisekisa ukhuseleko lwakho lwasekhaya kunye neofisi.
24 / 7 Loop Ukurekhoda
1. Akukho mfuneko yokukhathazeka ngememori khadi iya kuzaliswa, iya kubhala ngokuzenzekelayo iifayile ezidala kunayo entsha, nceda zikhuphe iifayile ezibalulekileyo ngexesha elifanelekileyo.
2. Qaphela: Ikhamera ayisebenzi ngaphandle kwekhadi le-micro sd efakwe, kufuneka uyithenge ngokuhlukileyo ngaphambi kokusetyenziswa.
ICrovert Extremely Well
1. Efihlakele kakhulu ekwakheni kwilenki ukufanisa isakhelo sezithombe njengento yokuhlobisa ikhaya, ungeke ufumane i-lens yekhamera nokuba ukhangele kuyo.
2. Ukulula nokusebenzayo, ukuma ngaphakathi kunye nokuxhoma umgodi, unokuvula ukuma kwayo kwaye uyibeke etafileni, unokuyixhoma eludongeni. Akunako kuphela ukusetyenziswa njengekhamera efihliweyo, kodwa kwakhona njengento yokuhlobisa ikhaya.
Ibhetri ye-10000mah eyakhelwe ngaphakathi
1. Eyakhelwe kwi-10000mah Super Battery: ukurekhoda ngesandla ngosuku lwamaxesha ukuya kwii-30 iiyure kunye nobusuku bokurekhoda okubonakalayo kwiiyure ze-10. Okanye ukuhamba kwe-PIR isilondolozo esisebenzayo
2. Le khamera yokujonga buqu iyasebenza ngokufanelekileyo kwinkqubo yokhuseleko lwasekhaya, nokuba kukho ukuphazamiseka kwenkonzo yamandla ombane.
Umbono woBusuku obuSebenzayo
1. Inesiphumo esihle sombono wasebusuku kwicandelo lelensi eyi-1mm, ngobuchwephesha be-Black LED, ikhamera ayenzi kukhanya kubonakalayo ebusuku ngexesha lokusebenza.
2. Umbono wobusuku bokwenyaniso: Thelekisa iimveliso ezifanayo kumbono wobusuku obunamandla, le fowuni inokusebenza kuyo yonke indawo emnyama.
10452 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-5 Namhlanje